DOWNLOAD FARANY FARANY MUSIC2PC - PROGRAMME REVIEW - 2019
DLL rakitra dia tranonkala fifandraisana dynamika izay ahafahanao manatsara sy manara-penitra Windows amin'ny alàlan'ny fanangonana data. Indrisy fa vitsy ny programa afaka mitantana io karazana rakitra io. Ny iray amin'ireo fampiharana ireo dia ny DLL-files.com Client.
Ny iray amin'ireo asa fototra ao amin'ny DLL-files.com Client dia ny mitady ny fahadisoana mifandraika amin'ny DLLs, ny anton'izany dia hoe misy rakitra iray tsy ampy na tsy misy fanovana. Ny fikarohana dia miditra fotsiny ny anaran'ny rakitra tsy hita na olana, na ny ampahany amin'ny anarana.
Rehefa mahita ny rakitra misy olana amin'ny fampiasana ity rindrambaiko ity ianao dia afaka mametraka azy ireo mora foana. DLL-files.com Mpampiasa dia hanolotra ny tahiry takiana amin'ny alàlan'ny sehatr'izy ireo amin'ny aterineto ary manolo izany amin'ny olan'ny olana. Rehefa mifidy ny DLL tsara indrindra, ny programa dia mirakitra ny version Windows sy ny halavany (32 na 64 bit).
Amin'ity tranga ity, ny fametrahana ny rakitra voafaritra dia vita amin'ny tsindry iray monja, izay mamonjy ny fotoana sy ny ezaka ataon'ny mpampiasa. Ny fandaharanasa dia manao ny zava-drehetra amin'ny tenany. Tsy ny fametrahana ny rakitra eo amin'ny toerany ao anaty rakitra mafy, fa koa ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny rafitra.
Ho an'ireo mpampiasa za-draharaha bebe kokoa, azo atao ny miditra "Fijerena mialoha". Mifanohitra amin'ny fomba fijery tsotra, izay ahafahan'ny programa misafidy ny dikan-teny tsara indrindra amin'ny rakitra DLL ho an'ny rafitra fiasa manokana, rehefa mampiasa ny fomba fijery lavitra, ny versione rehetra ao amin'ny rakitra tianao dia aseho amin'ny valin'ny fikarohana, ary ny mpampiasa dia mamaritra izay tokony hapetraka.
Ankoatra izany, amin'ny fampiasana ny fomba fijery avo lenta, ny mpampiasa dia afaka manondro ny làlana izay hametrahana ilay zavatra.
Atsaharo amin'ny backup
Aorian'ny fikarakarana tsirairay, dia voavonjy ao amin'ny sehatry ny programa ny fitehirizana ny tahiry taloha. "Tantara". Noho izany, na dia misy zavatra tsy mety aza, dia afaka averina foana izany.
Mora ampiasaina sy interface tsara;
Ny fiteny maro (anisan'izany ny rosiana);
Fanohanana ireo dikan-teny maoderin'ny Windows;
Ny fahafahana mamorona fiarovana.
Ny fandaharam-potoana dia aloa, ary ny famaritana azy dia manana fetra manan-danja;
Raha miasa, tsy maintsy manana fifandraisana aterineto ianao.
Ny programa mpanjifa DLL-files.com dia fitaovana tsotra sy mahomby ho an'ny famahana ny fahadisoana mifandraika amin'ny fisian'ny DLLs. Noho ny fahafahana manova ny fombafomba, dia mety tsara ho an'ny mpisera mpiserasera sy ireo mpampiasa izay manana ny fahalalany dia voafetra ihany. Ny tsy fahampian'ny mainty dia ny fandefasana ny dikan-teny feno amin'ny fangatahana.
Download ny andrana fizarana DLL-files.com client
Ahoana no hamahana ny hadisoana amin'ny window.dll tsy misy Avereno atao ny rakitra Manamboara olana amin'ny tsy fisian'ny zlib1.dll Client Shop
DLL-files.com Klioba dia vahaolana rindrambaiko mahomby mba hiara-miasa amin'ny tranokala fifandraisana dynamique (DLL), mahita, manamboatra, manolo ary mamerina azy ireo.
Sarany: $ 15